Sacuudiga Oo Sheegay Inay Xujeyda Fiisaha Ku Codsan Karaan, Kuna Heli Doonaan Muddo Daqiiqado Ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sacuudiga Oo Sheegay Inay Xujeyda Fiisaha Ku Codsan Karaan, Kuna Heli Doonaan...
Sacuudiga Oo Sheegay Inay Xujeyda Fiisaha Ku Codsan Karaan, Kuna Heli Doonaan Muddo Daqiiqado Ah
Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ee dalka Sacuudiga waxay maanta shaacisay inay bilaabi doonaan in Xujeyda ay fiisaha si Online ah ku codsan karaan, kuna heli karaan muddo daqiiqado gudaheed.
Kormeeraha Guud ee Barnaamijka Elektorooniga ee Xajka iyo Cumrada ee dalka Sacuudiga, C/raxmaan Shams oo wareysi siiyey Telefishinka MBC ayaa sheegay inay Xujeyda aan u dhalanin Sacuudiga ay qaab online ah ku dooran karaan Xirmooyin Adeegyo kala duwan, kuna dalban karaan Fiisahooda.
Waxa uu carrabka ku dhuftay inay Xujeyda ka imaanaya meel ka baxsan Sacuudiga ay dhibaato iyo daal badan ku qabaan Adeegyadda Xajka iyo Cumradda ee ay bixiyaan Shirkadaha iyo Wakiilladda ku sugan dalalkooda.
Kormeeraha Guud ee Barnaamijka Elektooniga ee Xajka iyo Cumrada ee dalka Sacuudiga, C/raxmaan Shams waxa uu carrabka ku adkeeyey in Fiisaha Elektoroonikada haatan loo soo saari doono dadka ku nool dalalkaasi , iyadoo haddii ay Xujeyda Warbixintooda si sax ah u soo dhigaan Nidaamka Online-ka loo soo saari doono Fiisaha Xajka iyo Cumrada.
Dhinaca kale, Kormeeraha Guud ee Barnaamijka Elektooniga ee Xajka iyo Cumrada ee dalka Sacuudiga, C/raxmaan Shams waxa uu intaasi ku daray inuu Xafiiskooda si dhow ula shaqeyn doono Wasaaradaha Arrimaha Dibedda iyo Gudaha ee Sacuudiga, si loogu sameeyo si ka fudud in Fiisaha aan Xujey la soconin loogu diro Baasabooradooda Safaaradda.
Si kastaba ha ahaatee, Xujeyda Soomaalida ee ku sugan gudaha dalka waxay had iyo jeer culays kala kulmaan Helitaanka Fiisaha Xajka iyo Kharajka Xad-dhaafka ee Tikidhaha Shirkaddaha Diyaaradaha ee xilliga Xajka Xujeyda u daabula dalka Sacuudiga, si ay u soo gutaan Waajibaadka Xajka oo ka mid ah Tiirarka ugu muhiisan ee Islaamka.
Previous articleDhageyso: DF Soomaaliya oo dalka ka mamnuucday dhowr diyaaradood
Next articleDEG DEG: Ciidamada Amisom oo qarax culus lala helay